Mpanamboatra baolina keramika - Orinasa sy mpamatsy baolina keramika any Sina
Adsorbent Desiccant Activated Alumina Ball
Ny alumina navitrika dia manana lalan-kely micro, ka lehibe ny velarana manokana. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny adsorbent, desiccant, defluorinating agents ary catalyst carrier. Izy io koa dia karazana desiccant amin'ny rano sy ny adsorbent poloney-molekiola, araka ny polarizasiôna molekiola voapoaka, ny hery miraikitra dia mahery amin'ny rano, oksida, asidra acétika, alkaly sns. anaty rano, tsy misy fanitarana, tsy misy vovoka, tsy misy triatra.
Alumina mihetsika potasioma permanganate
Ny KMnO4 amin'ny alimina navitrika miaraka amina fizotry ny famokarana manokana, dia mandray mpandefa alumina mihetsika manokana, aorian'ny hafanana ambony
famatrarana vahaolana, famotehana sy fizotry ny famokarana hafa, ny fahaizan'ny adsorption dia mihoatra ny in-droa amin'ireo vokatra mitovy amin'izany.
17% AL2O3 Bola Ceramic Alumina
17% AL2O3 Inert Alumina Ceramic Ball (Catalyst Support Media) no be mpampiasa indrindra amin'ny Catalyst Support Media eran'izao tontolo izao noho ny tsy fitovizany sy ny fahatokiany. Izy io dia namokatra tamin'ny alàlan'ny akora tanimanga porcelain tena tsara kalitao, izay manana fitoniana tena tsara, tanjaka mekanika avo lenta ary fanoherana ny fikorontanan'ny hafanana, Izany no mahatonga azy ireo hisafidy tsara indrindra hanohanana ireo karazana catalyst.
23% AL2O3 Inert Alumina Ceramic Ball dia manohana baolina porcelain
23% AL2O3 Inert Alumina Ceramic Ball (Catalyst Support Media) no be mpampiasa indrindra amin'ny Catalyst Support Media eran'izao tontolo izao noho ny tsy fitovizany sy ny fahatokiany. Izy io dia namokatra tamin'ny alàlan'ny akora tanimanga porcelain tena tsara kalitao, izay manana fitoniana tena tsara, tanjaka mekanika avo lenta ary fanoherana ny fikorontanan'ny hafanana, Izany no mahatonga azy ireo hisafidy tsara indrindra hanohanana ireo karazana catalyst.
Famonosan'ny Tower Ball-Ceramic Mid-Alumina
Ny baolina keramika afovoany -Alumina dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro, ao anatin'izany ny solika, ny injeniera simika, ny famokarana zezika, ny entona voajanahary ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Izy ireo dia ampiasaina ho fonosana sy fitaovana fanohanana ny catalista amin'ny sambo fanehoan-kevitra ary ho toy ny fonosana amin'ny tilikambo. Manana endri-javatra simika marin-toerana izy ireo ary ambany ny tahan'ny fitrohana rano, manohitra ny mari-pana ambony sy ny tsindry ambony, ary koa manohitra ny harafesin'ny asidra, alkaly ary solvents organika hafa. Izy ireo dia mahazaka ny fiovan'ny maripana mandritra ny dingan'ny famokarana. Ny tena andraikitry ny baoritra seramika tsy mitongilana dia ny fampitomboana ny toerana fizarana entona na ranoka, ary hanohanana sy hiarovana ny cataly mampihetsika amin'ny hery ambany.
99% AL2O3 Ballam-Ceramic Alumina
99% High Alumina Ceramic Ball (Catalyst Support Media) dia vita amin'ny vovoka alumina misy atiny silicon ambany. Ny fahadiovana avo sy tanjaka avo lenta dia mahatonga azy ireo mahatohitra hafanana avo lenta, ampiasaina hialana amin'ny tilikambo fihenan'ny silika manarona fitaovana any ambanin'ny tany na loto na mpanondrana catalyst misy poizina. Izany no mahatonga azy ireo ho safidy tsara indrindra ho fanohanana ny karazana catalyst. Ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny solika, simika, zezika, entona ary fiarovana ny tontolo iainana izany, ho famporisihana ny reactor handrakofana ireo fitaovana fanohanana sy fanangonana tilikambo.
Porous Ceramic Ball ho an'ny catalyst mandrakotra sy fitaovana fanohanana
Ny baolina seramika porous dia antsoina koa hoe baolina sivana. Izy io dia vita amin'ny fanaovana pore 20-30% ao anatin'ny baoritra seramika tsy mihidy. Noho izany dia azo ampiasaina tsy ho an'ny fanohanana sy ny fanakonana ny catalyst fotsiny izy io, fa amin'ny fanivanana sy ny fanafoanana ny fahalotoan'ny voa, gelatin, asphalting, metaly mavesatra ary ion-by latsaka ny 25um. Raha apetraka eo an-tampon'ny reactor ny baolina porses dia tsy azo esorina amin'ny dingana taloha ny maloto ao anaty poresy ao anaty baolina, avy eo miaro ny catalyst ary manalava ny cycle cycle an'ny rafitra. Satria samy hafa ny fahalotoana misy ao amin'ny fitaovana, ny mpampiasa dia afaka misafidy ny vokatra amin'ny habeny, pores ary porosity, na raha ilaina dia ampio molybdenum, nikela ary kobalta na singa miasa hafa hisorohana ny catalyst tsy hoka na fanapoizinana.
Fangatahana hafanana avo lenta
Ny baolina tsy mitongilana miaraka amin'ny faritra malama, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana, ny tanjaka avo lenta, ny fifehezana ny hafanana ary ny fahaizany mafana, ny hafanan'ny hafanana avo, ny fitoniana tsara ary ny fiovan'ny mari-pana dia tsy mora vaky, sns. zavamaniry amoniaka. Ny baolina refrakotra dia manana tombony betsaka, toy ny:
Hery lehibe, vanim-potoana fampiasana ela.
Ny fitoniana simika, tsy hihetsika amin'ny fitaovana izy io.
Fahombiazana tsara amin'ny fanoherana ny mari-pana avo, fanoherana ny hafanana avo hatramin'ny 1900 ℃.
Ny fikolokoloana baolina dia mety amin'ny famolavolana fitaovana ampiasaina amin'ny milina fitotoana baolina.